Mayelana NATHI - Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd.
ISuzhou Hanrui Electric Co., Ltd.isesiFundazweni saseJiangsu, idolobha elihle lamanzi eningizimu yoMfula iYangtze, elizungezwe iShanghai, iNanjing, iSuzhou Xichang nezinye izindawo ezisemadolobheni, ezinezimo eziphakeme nezokuthutha okulula. Indawo yokukhiqiza itholakala eJinfeng Town, eZhangjiagang City, ezweni lezimboni zensimbi, No. 48, Huarun road.
Le nkampani iqoqo lokuthuthuka nokukhiqizwa kohlelo lokuzenzekelayo kwezimboni, ukuthuthukiswa komkhiqizo wokuzenzakalela okungajwayelekile, ukukhiqiza, ukuthengisa nokusebenza njengenye yamabhizinisi ezobuchwepheshe.
Le nkampani ithatha umgwaqo othuthukile wesayensi ngokuphathwa okunzima, ilwela ukuphelela, futhi izama ukudala izinhlobo ezingcono. Ihambisana nomgomo wekhwalithi kuqala, idumela kuqala, kanye nenkambiso yebhizinisi. Kwenza yonke imizamo ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezifanele zabakhiqizi bezokuphatha futhi bahlangabezane nezidingo ezenziwe zaba ngezakho zamakhasimende namabhizinisi.
Yamukela amakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ukuze eze ukuxoxa, sebenzani ndawonye ukudala okukhazimulayo.